Birao vaovao no azon'ny lapan’ny tanànan’ Betafo
Tonga tany Betafo, nitokana ny lapan’ny tanànan’ Betafo an-tampon-tanàna ny Praiminisitra lefitra Hajo Andrianainarivelo, ny alatsinainy 1 jolay 2013 lasa teo. Famatsiam-bolan’ny VPDAT ( 2011 sy 2012) mitentina 88 tapitrisa Ariary ho an’ny kaomina ambonivohitra no nanitarana sy nampakarana ity fotodrafitrasa ity. Famatsiam-bola ho fanatsarana ny asam-panjakana atolotra ny vahoaka hoy Andriamatoa Praiminisitra lefitra Hajo Andrianainarivelo, rah any herinandro teo no nahazo ny anjarany ny tany amin'ny kaomina ambanivohitra Alakamisy Ambano, mbola aty amin’ny faritr’I Vakinankaratra ihany.
Nisaotra manokana ny Praiminisitra lefitra ny ben’ny tanànan’I Betafo noho izao fahavitan’ny fanavaozana ny lapan’ny tanàna izao, satria teo aloha hoy izy, dia “cimetière de projet” i Betafo, nandritra ny nitantanan’Atoa Andrianainarivelo ny fanajariana ny tany kosa anefa, dia lasa kaomina ambonivohitra i Betafo, ary izao mbola mitohy izao ny fanampiana mba ho mendrika tokoa izany maha kaomina ambonivohitra izao ity kaomina ity.Raha fitaovana sy foto-drafitrasa ho an’ny fahadiovana no nangatahin’ny ben’ny tanànan’i Betafo, dia ny resaka fandriam-pahalemana kosa no nangatahin’ny lehiben’ny faritra fanampiana fa mampikaikaika ny mponina.
Noraisin’ny Praiminisitra lefitra ohatra kosa ny dinan’I Melaky, ohatra iray, fa rehefa vonona hifanome tanana ny rehetra, ka vonona hamerina ny dinam-piaraha-monina, dia mirindra sy mandry fahalemana io fiaraha-monina io.
“ Tsy afaka ny hiolonolona irery mihitsy isika Malagasy, fa ny fahaizantsika mifampiraharaha amin’ny vahiny no zava-dehibe. Anjarantsika kosa no manara-maso ireny vola avy amin’ny vahiny ireny, mba handeha amin’ny tokony ho izy, toa izao fitantanana tsara ny volam-panjakana ety ifotony, ka nahavitana izao foto-drafitrasa ho an’ny vahoaka izao”.
Naverin’ny Praiminisitra lefitra teto, fa tsy mba tahaka ny fitantanana orinasa ny fitantanana ny volam-panjakana, fa izay naloan’ny vahoaka tamin’ny alalan’ny hetra sy ny haba naloany, dia tokony averina aminy hampandrosoana fa tsy hakan’ny fanjakana tombony. “Samy tompon’andraikitra isika… Miara-miasa isika, izay no fanovana tiana entina eto amin’ny firenena. Tsy maintsy atao ny fifidianana, ary ny ezaka rehetra tsy hahavitan’ny fifidianana dia fanetriben’ny firenena… tsy misy olona iray, na roa, na telo, na efatra, na dimy, na n’arivony aza afaka miteny fa izy irery ihany no afaka mampandroso ity firenena ity. Fa isika miaraka ireto no afaka mampandroso amin’ izay fanomezam-pahasoavana nomen’Andriamanitra antsika tsirairay ka mampahery antsika amin’ny asa fanasoavana ny tanindrazana.” hoy ihany Atoa Praiminisitra lefitra.